Talooyin ku saabsan shaqaalaynta caymiska baabuurta, waxyaalaha maskaxda lagu hayo | Ragga Stylish
Gaari wuxuu xambaaraa kharashyo badan, dayactir iyo dayactir, canshuurta wadada, baarkinka, ITV, iwm. Midkood waa caymis. Sidaad ogtahay, Spain gudaheeda gawaarida oo dhan waa inay leeyihiin caymis kaas oo daboolaya ugu yaraan waajibaadka madaniga ah ee khasabka ah. Taasi waa, waxyeelada suurtagalka ah ee u geysatay dhinac saddexaad.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo suuqa yaal caymiska saddexaad. Sidee loo doortaa caymiska baabuurta ee aadka loogu taliyay? Waxaa jira tilmaamo xiiso leh oo maskaxda lagu hayo. Waxaa lagugula talinayaa inaad isbarbar dhigto daboolida iyo qiimaha.
1 Caymis hore
2 Daboolida hadba baahida loo qabo
3 Xadka caymiska
4 Ka taxaddar qaybaha xad-dhaafka ah
Inaad iibsato caymis baabuur waa inaad kansashadaa kii hore, iyo kan bil kahor. Haddii aadan horay u sii ogeysiin tan, caymiska hore si otomaatig ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa. Waxay ku filnaan doontaa in dukumiinti loogu diro shirkadda boostada, telegram, iwm.
Daboolida hadba baahida loo qabo
Marka laga hadlayo caymiska baabuurta, runti muhiimadu waa in lagu hagaajiyo caymiska baahiyaha aad qabtid. Ma aha su'aal ah inaad leedahay daboolid fara badan, laakiin waa shaqaaleysiinta baahiyaha iyo doorbidyada.
Kee xadka caymiska? Tusaale ahaan, kaalmada waddada waxaa laga kireysan karaa kiiloomitir 0 ama masaafo fog. Waxay sidoo kale tusaale u tahay magdhawga wadarta luminta gaariga. Shirkadaha ayaa aasaasa qaddarka iyada oo waxyaabo badan oo kala duwan ay ka dhexeeyaan.
Ka taxaddar qaybaha xad-dhaafka ah
Waxay caan ku tahay shirkadaha qaada caymiska baabuurta. Qeybo badan oo la bixiyo, ayaa sii kordhaya qiimaha kororka sanadlaha ah.
Si aad lacag u dhigato caymiskaaga, waxaa jira ikhtiyaari ah in qandaraas lagaliyo caymis xad dhaaf ah. Hawlgalkeedu waa sida soo socota: haddii aan heshiis kula galno siyaasad 500 euro ah, haddii ay dhacdo sheegasho annaga ayaa mas'uul ka noqon doonna bixinta 500 ee ugu horreeya ee dayactirka. Inta soo hartay waxaa sameyn doonta shirkadda caymiska.
Ilaha sawirka: El Garaje TUNING /
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Maxaa lagu xisaabtamayaa markaad shaqaaleyneyso caymiska gaariga?
Mid ka mid ah tixraacyada hadda jira: qaabka Johnny Depp